IApartment Entle. Iziko laseGranada - I-Airbnb
IApartment Entle. Iziko laseGranada
Igumbi elinobunewunewu elikwisitrato esithe cwaka kodwa esisembindini eGranada. Ineempawu ezibalaseleyo, iisilingi zomthi eziphakamileyo, ifenitshala yanamhlanje kwaye inazo zonke iintlobo zeenkonzo ezinje nge-Wi-Fi yasimahla, i-smart TV, ishawara enekholamu ye-hydromassage, ibhedi yokuhamba, njl.
Ukuhamba nje yimizuzu emi-5 ukusuka kwiziko lembali kunye nendawo yentengiso yaseGranada. Indawo yokumisa iibhasi kwisikhululo seenqwelomoya yimizuzu emi-2 kwaye le ndawo ineendawo zokupaka zikawonke-wonke ezikufutshane kakhulu.
Le ndlu inegumbi lokulala elinegumbi lokuhlambela le-en-suite, igumbi lokuhlala kunye nekhitshi evulekileyo. Njengoko isisakhiwo esihlaziyiweyo, igcina imiqadi yeplanga yesilingi. Ifenitshala yanamhlanje kwaye ipholile kwangaxeshanye.
Ikhitshi inazo zonke izixhobo eziyimfuneko, umatshini wokuhlamba, i-dishwasher, i-microwave enomsebenzi wegrill, njl.
Ikwanayo nomenzi wekofu, iketile, itoaster, ijuicer kunye neentlobo ngeentlobo zekitchenware.
Kwindlu yokuhlambela, ishawari inekholamu ye-hydromassage enezikhundla ezahlukeneyo.
Kwezo zibini zinabantwana abancinci, i-cot cot iyafumaneka.
4.89 · Izimvo eziyi-213
Le ndlu ibekwe kwindawo ezolileyo kwiimitha ezimbalwa ukusuka kwiziko. Ineentlobo ngeentlobo zeenkonzo ezinjengeevenkile ezinkulu, iikhefi, iindawo zokutyela kunye neendawo zokupaka zikawonke-wonke.
Inombolo yomthetho: VFT/GR/03324